Somatropin Genotropin from Pfizer in Thailand - HGH therapy in Bangkok
BitCoin neKadhidhi yeKodhadhi
Courier kuendeswa kuThailand
Yakagadzirirwa sei Genotropin pen?
Nzira yejojo ​​HGH?
Sei Genotropin ari nani?
Ndezvipi zvishandiso zvingashandise HGH?
Chii ichi HGH?
HGH mukuvaka muviri - musimba kukura
Deredza uremu neHGH
Dhiya maitiro ekushandura mu PDF
Whatsapp Messenger 24 / 7 (Tora 2%)
Dana & SMS 9: 00-21: 00 (GMT + 7)
Courier Delivery & Cash Zvinyorwa | Danai & SMS WhatsApp, Viber, Telegram, Line + 66 94 635 76 37 (Shandisai WhatsApp 2% kunotswa)
NOKUDZIRA KWENYU? wedzera
TAURA NESU wedzera
Log in ngoro ngoro
Kuwedzera / kuparara
Genotropin GoQuick Pen 12mg (36IU) x 6
Regular price 0.00 ฿ 81,000.00 ฿ sero
Kubva paongororo dze 18 Nyora kubvunzurudza
Kit iri mukati:
- Doro swab
- BD Ultra Fine Pen Simba
- Chirwere chinotonhorera chinokonzera (2-8 digiriji yekutsigira)
Mirayiridzo yekushandiswa (PDF file)
Mashoko akashanda: Somatropin
CCF: Recombinant growth hormone
Manufacturer: PFIZER MFG. BELGIUM NV (Belgium)
Mushonga wokukura hormone. Iyo inomiririra yakagadzirwa nemaitiro ekugadzirisa sematropin, akaenzana nekukura kwevanhu hormone. Vana vane urombo husina simba hunokura, uye Prader-Willi syndrome somatropin inowedzera uye inowedzera kukura kwemasimba emasaga. Sezvakakura, uye vana somatropin vanochengetedza chimiro chechimiro chemuviri, kukurudzira musimba kukura nekusimudzira kuunganidza mafuta. Especially sensitive to somatropin visceral adipose tissue. Mukuwedzera pakukurudzira kwekutaura, somatropin inoderedza kuwanika kwe triglycerides muzvinyorwa zvakawanda. Kunze kwekuti, zvinodhaka zvinokanganisa mafuta, makhabhohydrate uye mvura-munyu metabolism. Somatropin inokurudzira LDL receptors muropa, uye inoshanda pamakumbo uye lipoprotein profile mu serum. Kazhinji, kugoverwa somatropin nevarwere vane kukura kwehomoni kunoderedza kuwanda kweLDL cholesterol uye apolipoprotein B mu serumum. Uyewo, pangangodaro kuve nekuderedzwa kwecholesterol yakazara. Somatropin inowedzera insulini mizinga, Zvisinei, kushanya kweglucose mazinga kazhinji hazvina kuchinjwa. Vana vane hypopituitarism vanogona kukurumidza kudya hypoglycemia, vakagadzirirwa nevarwere vanowana mishonga. Somatropin inodzorera plasma volume uye mishonga inopisa, yakaderedzwa nekushaikwa kwekukura kwehomoni; inokurudzira kuchengetedza sodium, potassium uye phosphorus. Somatropin inokurudzira bone metabolism. Mune varwere vane kukura kweHymmone inoshaiwa uye osteoporosis somatropin kwenguva yakareba kurapwa kunotungamirira kugadziriswa kwema mineral nekuumbwa kwemapfupa. Somatropin kurapwa kunowedzera simba remasumbu nekutsungirira mumuviri. Somatropin inowedzerawo chibereko chemoyo, asi mamiriro emigumisiro iyi haasati azivikanwa. Basa iro rinogona kutamba mukuderera kweropa rekudzivirira. Muvatachiona vane kukura kweHymmone inogona kuve nekuderera kwehutano hwepfungwa uye kuchinja muhutano hwepfungwa. Somatropin inowedzera hutano, Inovandudza chiyeuchidzo uye inokanganisa kuenzanisa kwevanhu vane chirwere chemaurotransmitter muuropi.
Kubvisa uye kugovera
Sezvakaita kuvanhu vane hutano, uye mune varwere vane kukura kwehomoni inowedzera anenge 80% n / a vakapinda Genotropin®. Apo p / injection dose 0.1 IU / kg uremu hwenyama Cmax ndeye 13-35 ng / ml yakawanikwa pashure pe 3-6 no. Vd is 0.5-2.1 l / kg.
Metabolism uye excretion
Biotransformiroetsa itsvo uye chiropa. Avhareji T1 / 2 mushure mokunge pane / muGenotropin® kune varwere vane kukura kwehomoni inenge ye0.4 no. Apo s / kusvika pakuiswa kwechirwere T1 / 2 inosvika 2-3 no. Izvozvo zvakatarisa kusiyana, zvichida, kunobatanidza nekuderera kunonoka kwechirwere mu n / a injection. Panenge ne0.1% inotungamirirwa nemishonga inomufananidzo usina kuchinjwa wakadhindwa mu bile.
Pharmacokinetics muzvipatara zvakasiyana-siyana
Izvo zvachose bioavailability ya Genotropin® kana s / zvakafanana kune varume nevakadzi.
Zvimwe zvikanganiso, zvinokonzerwa nekuchengetedza kwemvura: munhu mukuru (> 1% uye <10%) - purogiramu yedema, pastoznost miganhu yakadzika, artralgii, myalgia uye paraesthesia. Izvi zvinowanzove zvinyoro kana kuti zvisinganzwisisiki, Zvinowanikwa mukati memwedzi yekutanga yekurapa uye kuderera zvishoma nezvishoma kana mushure mekudzivirira kwechirwere. Kuwedzerwa kwezvikamu izvi zvakagadzikana kwaive neGermotropin®, iyo yevatano uye, zvichida, zvakasiyana-siyana zvichienderana nezera, umo kusakwanira kwekukura kwehomoni. Muvana, izvi zvinokonzerwa nehuwandu (> 0.1% uye <1%). CNS: kazhinji (> 0.01% uye <0.1%) - bhosidhe inopindwa nehutachiona, inogona kukura kwekudzivirira kweropa re optic. Pane chikamu chegadziriro ye endocrine: kazhinji (> 0.01% uye <0.1%) - kukura kwechirwere cheshuga mellitus type 2. Zvakare zvakaratidza kuderera kwe serum cortisol. Chirwere chechipatori chechiitiko ichi chinoratidzika sechina. Pane chikamu chemu musculoskeletal system: dislocation uye subluxation yemusoro wevakadzi, soprovozhdaющiesя prihramыvaniem, kurwadziwa muhudyu nemabvi; mune varwere vane Prader-Willi syndrome vanogona kuwedzera scoliosis (tk Genotropin® Inowedzera kukura kwekuwedzera); kazhinji - myositis, iyo inogona kukonzerwa nekuitwa kwem-cresol kuchengetedza, iyo inhengo yeGenotropin®.
Allergic reactions: kukanda kweganda uye kuchenesa.
Kugadziriswa kwemukati: pane nzvimbo yejojo ​​(> 1% uye <10%) - kuputika, tsvina, kuora mwoyo, kushaya simba, hypermia, kuzvimba, lipoatrophy.
Zvimwe: mune zviitiko zvishomanana (<0.01%) - Kubudirira kwehuukemukari mukati mevana, zvisinei, kuitika kweukama hwemaperembudzi hakusiyana nezvino muvana vasina kukura kwehomoni.
- Zviratidzo zvechirwere kukura, kusanganisira kukura kusingadzorwi kwechirwere chinokonzera kubata (antitumor therapy inofanira kupera musati yatanga mushonga weGenotropin®);
- Chinhu chakakosha, inokura nokukurumidza muvarwere semugumisiro wekuvhiya kwemoyo wakavhara kana kumimba, kushungurudzika kwakawanda uye kuora mwoyo kwakanyanya;
- Kuwedzera kurema (chiyero chepfungwa / kurema kwemuviri kunodarika 200%) kana kusuruvara kwakaipisisa kune varwere vane Prader-Willi syndrome;
- Kuvharwa kwe epiphyseal kukura kwenzvimbo dzemafupa mazhinji;
- Hypersensitivity kune chero chikamu chechirwere.
KUBVA kungwarira kunofanirwa kunyoreswa kune varwere vane chirwere cheshuga, vasingashandisi kuwedzera kwehutano, gipotireoze.
Chiitiko chekliniki naGenotropin® panguva yekuzvitakura ishoma. Saka, panguva yekuzvitakura inofanira kujekesa zvakajeka kukosha kwekugadzwa kwechirwere uye inogona kuisa njodzi, inobatanidza neizvi. Munguva dzepamuviri dzepamuviri dzehutachiwana hwekudzivirira hutoni zvakanyanya kuderedzwa mushure me20 yevhiki, zvichishandurwa zvese zvakakwana neAIDS 30 vhiki, saka saka kudiwa kwekuenderera mberi kunorapwa mushonga Genotropin® mu III trimester yekuzvitakura hazvibviri. Ongororo yekuongorora mhuka haina kuratidza chero matambudziko anokonzera pamucheche, kubva pane izvo zvisingafaniri kuva, mhinduro dzakafanana dzichawanikwa kana uchishandisa Genotropin® munhu. Mashoko akavimbika pamusoro pekuwedzera kwekukura kwehomoni mumukaka wemukaka haasipo, asi chero zvakadaro, kunwa kweprotineti yeprotein kubva pamimba yepamuviri yemwana kunenge kusingaitike.
Mhosva dzekuwedzera kudarika Genotropin® isingazivikanwi. Zviratidzo: mukudarika zvakanyanya kunokonzerwa ne hypoglycemia, uye ipapo hyperglycemia. Kuwedzeredza kwenguva refu kunogona kuitika zviratidzo zvinozivikanwa zvekuwedzera kwevanhu kukura hormone (akromegalija, gigantizm). Kurapa: kubviswa kwechirwere, simptomaticheskaya therapy.
GCS pakubatanidzwa kwekugadzirisa inoderedza kusvitsa kwechiitiko cheGenotropin® pakukura. Nekushandisa kumwechete kweGenotropin® ne thyroxin mild hyperthyroidism inogona kukura.
MASHOKO OKUFUNGA KWEMAPARMACIES
Mushonga unobudiswa pasi pemutemo.
MIBVUNZO NEMAGWARO ECHOKWADI
Mushonga unofanirwa kuchengetwa kure nekusvika kwevana, nzvimbo yerima pakushambidza kwe2 ° kusvika 8 ° C. Sirifu hupenyu - 3 gore. Mhinduro yakagadzirwa inogona kuchengetwa mufiriji (pakushambidza kubva ku2 ° kusvika ku8 ° C) panguva yevhiki dze4. Dzivisa kusviba kana cartridge, kwete gadziriro yakagadzirira.
mugove Share on Facebook Tweet Tweet musi Twitter kubayirira naro Pin musi Pinterest
Price list USD
Price list EUR
Mutengo wemhando THB
Dhinda (Ctrl + D) kuti tiwedzere ku mabhukukiti
Subscribe to our facebook in Thailand
HGH Thailand - Buy growth hormone muThailand